Ukuthunyelwa kuka-Israyeli kwiNtengiso yeArabia yokuHamba kunokufumana indawo eDubai
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » iindaba » Ukuthunyelwa kuka-Israyeli kwiNtengiso yeArabia yokuHamba kunokufumana indawo eDubai
uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • lomhleli • Icandelo lokungenisa izihambi • I-Israel Iphula Iindaba • Iindaba zeShishini lokuhlangana • iindaba • Intetho yezoKhenketho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Iifayile ze-israeli kunye ne-uae
Isoyikiso seMfazwe yamakhaya kwa-Israyeli, kunye nokulwa phakathi kuka-Israyeli ne-Palestina ngoku kubonisa amathemba amakhulu kwi-Arabian Travel Market eDubai yokunyusa intsebenziswano kwezokhenketho phakathi kwala mazwe.
Abathwali be-United Arab Emirates i-Etihad Airways kunye ne-flydubai bazirhoxisile iinqwelo moya eziya eTel Aviv, bejoyina iinqwelomoya zaseMelika naseYurophu ukuphepha u-Israyeli ngenxa yokwanda kwemfazwe apho.
Ukuma kuka-Israyeli kwimakethi yokuHamba kweArabia kuncitshiswe kwayindawo encinci yeshelufu
Imeko yangoku ibonisa ukungaqiniseki kukhenketho lakwa-Israyeli kunye nePalestine kunye neNtengiso yeTourim
Iinqwelomoya e-UAE, ezisekele ubudlelwane bezopolitiko no-Israyeli kulo nyaka uphelileyo, zinyanga nje ezimbalwa ezedlule zisungule iinkonzo rhoqo kwa-Israyeli.
I-Etihad ka-Abu Dhabi inqumamise zonke iinkonzo zabakhweli kunye nemithwalo eya eTel Aviv ukusukela ngeCawa, yatsho kwiwebhusayithi yayo, icacisa ungquzulwano.
"I-Etihad ijonge imeko kwa-Israyeli kwaye iyaqhubeka nokugcina unxibelelwano olusondeleyo nabasemagunyeni kunye nababoneleli bezokhuseleko kwezokhuseleko," yatsho.
I-Flydubai ikurhoxise iinqwelomoya ukusuka eDubai ngeCawa, iwebhusayithi iyabonisa, nangona zimbini iinqwelomoya ezisebenza ngoMgqibelo. Ezinye iinqwelomoya zicwangciselwe iveki ezayo, ngokwewebhusayithi yayo.
I-airline isandula kusebenza kambalwa kuneenqwelo moya zayo ezicwangcisiweyo ezine zemihla ngemihla, icacisa ukwehla kwemfuno.